အလှည့်အပြောင်း — Steemkr
ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ငါကသူမြေတပြင်လုံးသည်ကျောင်းအတွက် ခဲ့ကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ သူကအမြဲတမ်းဌာနမှူးနှင့်ဆရာ, ဆရာမနှင့်အတူဒုက္ခရသလိုပဲ။ အဆိုပါဌာနမှူးကသူ့ကိုရှောင်နှင့်ဆရာ, ဆရာမတစ်ဦးခက်အချိန်သူ့ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ရသည်။
သူကအနည်းဆုံးပြောဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာသင်ခန်းတစ်ခုတည်းပြတင်းပေါက် pane ထဲကရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူကသူတို့အားလုံးကိုကြိုးပဲ့ခဲ့သည်။ ကျော်တစ်ထောင့်ရှိသူ၏လက်ရာများ၏ရလဒ်, ကျိုးစားပွဲခုံများနှင့်ကုလားထိုင်၏အမှိုက်ပုံအိပ်လေ၏။ သူကသူ့ပြစ်ဘို့တပြင်လုံးကိုကျောင်းရှေ့တွင်နှစ်ကြိမ် caned ခဲ့ပေမယ့်သူနောင်တမယူနျရြဈ။ ငါသူနှင့်တူပေါ်တွင်သယ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်သူကျောင်းကနေထုတ်ပယ်လိမ့်မည်ဟုသေချာခဲ့ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ အမေဆုံးသွားရှာတယ်။ တစ်ဖွဲ့လုံးအပတ်ကသူသည်ကျောင်းပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူပြန်လာသောအခါသူကလုံးဝပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည်။ ငါနီးပါးသူ့ကိုအသိအမှတ်မပြုခဲ့ပါဘူး။ ခဏကျနော်တို့အသစ်တစ်ခုကိုအတန်းဖော်ခဲ့ထင်ပေမယ့်အားလုံးညာဘက်ကောင်းစွာဆောင်ဖို့နဲ့သေသပ်စွာ-ဝတ်ဆင် ဖြစ်ခဲ့သည်။
မိမိအသှငျအပွငျပြောင်းလဲမှုခဲ့သာ။ သူ၏အမူအကျင့်လည်းသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတယ်။ သူကအတန်းထဲတွင်အများဆုံးကောင်းမွန်စွာပြုမူကောင်လေးဖြစ်လာခဲ့သည်။ မရှိတော့သူကုလားထိုင်သို့မဟုတ်အရာအားလုံးထက်ကိုချိုးဖျက်ခဲ့ပေ။ အဆိုပါဆရာ, ဆရာမများနှင့်ဌာနမှူးသိသိသာသာတုန်လှုပ်ခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ကဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။
ဒါဟာ အသစ်တခုအရွက်ကျော်လှည့်မယ့်အံ့ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့တော့သူကသူ့ကိုပြောင်းလဲသွားစေသည်ကသူ၏မိခင်ရဲ့အသေခံခဲ့သည်ကြောင်းငါ့ထံသို့ခိုလှုံ။ သူဟာသူ့မိခင်သေဆုံးသွားရုံမရောက်မီခဲ့ပုံကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောသဘောပေါက်လာတယ်။ ဒီတော့သူကသူ့ကိုယ်သူပြုမူရန်သူမ၏ခေါနီးမှာသူ့မိခင်တစ်ဦးဂတိတော်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကစောင့်နေကြ၏ဒါကဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော။
esteem turning life best
Congratulations @htoolay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @htoolay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @htoolay! You receivedapersonal award!